Shacabka Vietnam oo laga codsaday iney joojiyaan cunista Eeyaha | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Shacabka Vietnam oo laga codsaday iney joojiyaan cunista Eeyaha
Mas’uuliyiinta caasimadda dalka Vietnam ee Hanoi ayaa ku boorrinaya dadweynaha iney joojiyaan cunista hilibka eeyaha, maadaama ay arrintaas wax u dhimayso sharafta magaalada, uuna ka dhalanayo cudurka Raabiyada.
Golaha ay ku bahoobeen shacabka magaalada Hanoi ayaa sheegay in cunista hilibka eeyahay ay fool xumeyneyso sawirka laga heysto magaalada oo hadda ah “caasimad horumarsan oo ku taalla dunida casriga ah”.
Xafiiska maamulka magaalada ayaa intaas ku daray in “isticmaalka hilibka eeyahay uu hor seedi karo cudurro faafa”.
In ka badan 1,000 dukaan oo ku yaalla caasimadda Hanoi ayaa wali si caadi ah loogu iibiyaa hilibka eeyaha iyo bisadaha.
Guddiga ayaa sidoo kale dadweynaha ka codsaday iney joojiyaan cunista hilibka bisadaha oo aan aad loogu badneyn balse wali la isticmaalo.
Masuuliyiinta guddiga ayaa sheegay in xayawaannadaas badankood loo dilay si arxan darro ah.
Qiyaastii 490,000 oo eey ayaa jooga magaalada Hanoi, waxaana intooda badan lagu haystaa guryaha.
Kororka tirada dadka Vietnam oo sii badaneysa ayaa hoos u dhigeysa cunitaanka hilibka eeyahay, hase ahaatee wali waxaa jira dad cuna, waana “dabeecad loola qabsaday sida balwadda”, sida ay soo tabisay Linh Nguyen, oo ah wariye ka tirsan laanta BBC-da ee dalka Vietnam.
Xitaa dhinaca baraha xiriirka bulshada, dad fara badan ayaa soo dhaweeyay arrintan joojinta hilibka eeyaha ah, balse kuwo kale ayaa ku doodaya in balwaddaasi ay adag tahay in shacabka Vietnam ay si fudud ku joojiyaan.
Mid ka mid ah dadka isticmaala facebook oo lagu magacaabo Dang Ngoc Quang, ayaa ku dooday inaan loo baahneyn mamnuucidda hilibkaas gabi ahaanba, maadaama sida uu sheegay ay tallaabadaas liddi ku noqoneyso xornimada.
Taas baddalkeeda, wuxuu soo jeediyay in canshuur aad u badan lagu soo rogo ganacsiga hilibka eeyaha ama in meelo khaas ah lagu iibiyo.